NCS Dhigirii Mikana - Verenga izvi kuti zvibatanidzwe! - Element Society
Tinotarisira iwe / wechidiki wako wakanga uine nguva yakawanda pamwe nesu paNCS iri zhizha uye tinoda kukuona uchienderera mberi nerwendo rwako kuburikidza nechimwe chezvidzidzo zvedu zvekupedza kudzidza.
Zuva: 2nd October 2018
Time: 6pm kusvika 7pm
Info: Element Youth Board inogadzira zvose zvatinoita sechipo! Iwe uchakubatsira kuronga makore anotevera NCS nguva, kuronga zviitiko nemakwikwi ayo vechidiki vari muguta rose vanogona kupinda mukati uye kubatsira kubatanidza nzvimbo yakawanda yepakati penzvimbo kubva kumunhu wechidiki pfungwa yekuona.
Nzira yekunyora nayo: Uyai kune musangano wekutsvaga uye tsvaga zvimwe kana kuti maIrime Rich pane Richard.r@elementsociety.co.uk kuti vataure nezvekubatanidzwa.
Vatungamiriri Mukurovedza Kuita Musangano:
Zuva: 3rd October 2018
Nguva: 6pm - 7pm
Info: Dzidzo yekusununguka ichavhara modules muUtungamiri, Dynamics Team, Diversity Awareness and Communication Skills. Kudzidziswa uku kunangwa kukupa muganhu paunenge uchienda munyika uye zvakare matanho ekutanga kutora kana iwe uchida kushanda paCNS mune ramangwana.
Element Champions Induction Musangano:
Zuva: 4th October 2018
Info: Element Champions zvichatibatsira kuparadzira shoko pamusoro peNCs muzvikoro / chujiro pedyo neSheffield. Tichaita kuti iwe uwedzere neoodies uye unokusimbisa iwe nekudzidzira kusununguka kuitira kuti iwe unogona kutibatsira kudanidzira pamusoro pemikana yeNCS yezhizha 2019!
Nzira yekunyora sei: Uyai kuenda kumusangano wekutsvaga uye tsvaga zvimwe kana maIndaneti Rich pane Richard.r@elementsociety.co.uk kuti vataure nezvekubatanidzwa.
Info: Tinoda kuve nechokwadi chekuti NCS dzose dzinopedza kudzidza dzinogona kudzoka zvakare uye dzinotaurirana nemumwe wevashandi vedu. Yedu Element Mentor chirongwa inokurudzira iwe kuti usayine uye uve nhengo yevashandi semuongorori. Isu hatisi nyanzvi asi tinofara kukanda maziso edu pamusoro peCV yako / yunivhesiti yekushandisa kana kukutsigira nemabasa ekufambisa uye kubvunzurudza.
Nzira yekunyora sei: Email Rich on Richard.r@elementsociety.co.uk kuti vataure pamusoro pekuwana chinhu chinonzi Mentor chakatumwa.
Info: Kana iwe wakafuridzirwa kuti urambe uchiita mutsauko munharaunda yako, asi usingazivi matanho aunofanira kutora mberi uye mukana uyu ndewe iwe! Tichakubatsira kutsvaga mikana yaunogona kufarira uye nekukutsigira iwe nekunyora kwavari.
Nzira yekunyora sei: Email Rich on Richard.r@elementsociety.co.uk uye isu ticharonga iwe zuva rakanaka / nguva yekukurukura nemunhu wevashandi nezvemikana.